Shirkii Golaha dhexe ee xisbiga UDUB iyo catowgii Hoggaankii Xisbigaas | Somaliland.Org
October 31, 2011	“Xisbigu muxuu u dhacay sagaal sanadoodna waxa hayay Cigaal Sideedna waxa hayay Rayaale dadkuna waxay jecel yihiin isbedel”
“Waxaan ahay ragga hungurigu ku jiro laakiin balan waxaan idiinku qaadayaa inaan UDUB dildilaac ka soo bixin”
Hargeysa (Somaliland.Org)-Xisbiga Mucaaridka ah ee UDUB ayaa shirkiisii golaha dhexe oo ay ka qeyb galeen dad ka badan 700 oo qof ayaa maanta uga furmay Huteelka Crown ee magaalada Hargeysa. shirkan oo ahaa mid u afduuban Madaxweyne Ku xigeenkii hore ahna Ku simaha Guddoomiyaha Xisbigaasi.
Shirkan may jirin wax doorasho ah oo ka dhacday oo lagu soo doortay xubnaha Golaha dhexe hase yeeshee waxa shirka laga sheegay in Ku simaha Guddoomiyuhu uu soo xulay ilaa 250 xubnood oo ka mid ah Golaha dhexe inta kale oo aan la cayimina uu soo dhamaystiri doono. Shirkani kamay jirin mid si furan looga dooday xeerarka xisbiga iyo Golaha dhexe midnaba.
Wasiirkii hore ee wasaarada duulista hawada iyo gaadiidka cirka Md. Cali Maxamed Waran cadde oo ka hadlay shirkaasi oo socday maanta oo qudha waxa uu sheegay inay isa soo abaabuleen waxaanu yidhi “Waad ogtihiinoo xisbiga tallada dalka ka degaa muddo ayay qaadataa siduu isu soo abaabulaa si uu dagaalka mar kale u galo. Maanta waxaanu soo gabo-gabaynay dib u gurashadii xeesha dagaal ee aanu sanadka iyo googa’a ku qaadanay.
“Waxaanu ummadda reer Somaliland ee shakiday u sheegaynaa beelaha shiraya ee ka shakisan masiirkooda iyo busaarada baahsan ee wadanka ka dhacday inaanu soo deg degi doono,waxaanu idiin balan qaadaynaa inaanu dalka ka saari doono marxalada labaad ee horumarinta ee saaxiibadayadii aanu meesha u yara dhiibnay ay wadi kari waayeen ee baabuurkii baatroolka badani ku jiray ee aanu u dhiibnay socon kari la’yahay,”ayuu yidhi Cali waran-cadde.
Waran cadde wuxuu sheegay inaanay UDUB dildilaaci doonin waxaanu yidhi “Waxaan ka mid ahay ragga hungurigu ku jiro laakiin balan waxaan idiinku qaadayaa inaan UDUB dildilaac ka soo bixi doonin sida nacabku filayo oo haddii la ii doortana aan ku hoggaamiyo bash bash iyo barwaaqo haddii saaxiibaday la doortana aan ku garab galo.”
Madaxweyne Ku xigeenkii hore ahna Ku simaha Guddoomiyaha xisbiga UDUB Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, oo ka hadlay shirkaasi ayaa ka waramay marxaladihii ay Somaliland soo martay, waxaanu faahfaahin ka bixiyay dib u heshiisiintii beelaha, qaramaynta maleeshiyooyinkii hubaysnaa iyo u digo rogashadii hanaankii dimuqraadiga aha.
“Haddii ay noqoto muxuu xisbiga UDUB u dhacay sagaal sanadoodna waxa tallada hayay Cigaal sideed sanadoodna waxa tallada hayay Daahir Rayaale oo labaduba UDUB ah dadkuna waxay jecel yihiin isbedel,”ayuu yidhi Axmed Yuusuf Yaasiin.
Guddoomiye Ku xigeenka UDUB waxa uu ku faanay inay dalka ka suurto galiyeen afar doorasho oo xor ah,maamul fidinta gobolada bari iyo nabadgelyada dalka.
“Waxa lama ilaawaan ah oo beesha caalamkuna indhahooda inoo soo jeedisay Madaxweyne Rayaale awooda ugu wareejiyay maamulka hadda dalka ka jira iyadoo wax qas iyo qalaan-qal ahi dalka ka dhicin, waxaanu jideeyay dhaqan suuban oo ku dayasho mudan.”ayuu yidhi Ku simaha Guddoomiyuhu.
“Guddidii fulinta waanu sameynay oo waa 33 Xubnood, Golihii dhexana waa la dhaariyay 250 ka mid ah oo maanta soo xaadiray, waxaynu marka uu shirkani xidhno aanu galaynaa kaabistii xeerka xisbiga UDUB,”ayuu yidhi Axmed Yuusuf Yaasiin.
Ku simaha Guddoomiyuhu waxa kale oo uu sheegay inay dhawaan qabsan doonaan shirweyne soo hormariyay.
Waxa kale oo shirkan ay ku soo bandhigeen suugaan iyo gabayo lagu ammaanayo xisbiga UDUB.
Previous PostXaaskii Marxuum Cigaal Oo Ka Warantay Dagaal Iyo Dulmi Ay Ka Tirsatay Rayaale Iyo Xisbiga UDUBNext PostBadhasaabka Gobolka Hawd Oo Dhagax dhigay Saldhig Boolis oo laga hirgelinayo Degmada Sayla-bari	Blog